विद्या सापकोटा, (काठमान्डौ )
प्रेम, सबन्ध वा भावीको लेखान्त केलाई मान्नुपर्ने हो मान्छेले ? के प्रेम र सम्बन्ध एकै तत्वहरु हुन् ? एउटा मान्छेले एकै समयमा दुईजनालाई प्रेम गर्नु सम्भव छ ? कि प्रेम शब्द नै भ्रमको अर्को नाम हो ? बारम्बार प्रश्नले गिजोल्न लागेको थियो । परिस्थिति कल्पनाभन्दा बाहिरको हुनुले पाँचसात रेक्टरका भूईचालाहरु गइरहन्थे मन भित्रभित्रै । यी र यस्तै प्रश्नहरुलाई पछ्याउदै त्यो सुदूर गाउँसम्म पुगेको थिएँ क्यार म ।
“कमला खै त ?“ आमाको गोडामा घोप्टिदै यताउता हेर्यो प्रमेशले ।
उत्तर आउनु अगावै छिनछिन चुरा बजाउदैं एक लज्जावती युवती हाजिर भई । प्रेम भरिएका प्रफुल्ल आँखाहरु प्रमेशतिर फाल्दै मतिर इसारा गरी उसले, “सगुन हैन ?”
“हजुर !” मेरा हात पनि जुम्ल्याहा भए ।
यस्तैमा हामी पिढींको फलैचामा पुगिसकेका थियौ । “लामो यात्राबाट आउनुभएको थाक्नु भएको होला ?” स्वाभाविक मुस्कानकासाथ भित्र पसी ऊ । थाकेको त छदैं थिएँ त्यसमा मन बशमा थिएन । कस्तो–कस्तो लागिरहेको थियो । त्यो कस्तो–कस्तो के थियो मलाई नै थाहा थिएन । केहिबेरमा लटक्क जमेको दही र अरु खानेकुरा लिएर सामुन्नेमा उभिई ऊ । नियाश्रोले चाउरिएका अनुहार उज्यालो पार्दै आमा हाम्रै अगाडी बसिरहनुभएको थियो । टुसुक्क ऊ पनि बसी । मलाई झन् अप्ठ्यारो लागेर आयो । बोल्न लाग्दा शब्दहरु घाटीमा आएर गुजुल्टो परेजस्तो भयो । लत्रिएको अनुहार देखेरै होला, बरण्डाको बिछ्यौना देखाउदै आरमको लागि आग्रह गरी उसले ।
सामुन्नेको घनाजंगलयुक्त पहाड, परबाट चिहाउदैं लुक्दै गरेजस्तो सेतो हिमाल, धन्सारसहितका जस्ता वा टिनले छाएका घरहरु अनि पवनको मन्दमन्द स्पर्श । बार्दलीको खाटमा पल्टदै नियाले मैले । पश्चिममा पुगेका राता किरणहरु साझ पर्न लागेको संकेत दिदै थिए । वातावरण मोहक थियो तरपनि मन शान्त हुन सकिरहेको थिएन । कताकता डर थियो नै ।
समय कटाउन कै लागि डायरीको पानामा रुमल्लिदै थिएँ म । “सगुन जी !” खाना खान जाऔं । झ्याउकिरीको झ्याउँझ्याउँमा आफ्नो मसिनो स्वर मिसाउदै छेवैमा आइपुगी ऊ । जूनको उज्यालोमा उसको छायाँ बार्दलीबाट आँगनसम्मै तन्किएको थियो । लामो सलक्क परेको कपाल, बुट्टेदार फरिया, टपक्क मिलेको चोली, मिलेकोे शरीर छायाँचित्र मै गाडिएछु ।
“सञ्चो भएन कि ?” दोश्रो पटकको झकझकाइमा आँखाहरु एक अर्कामा ठोक्किए । कानमा मुन्द्रा, हातभरी चुरा, गलामा लामो पोते, लाम्चो नाकमा टलक्क टल्केको फूली, भरी सिउँदो, सहृदयी अनुहार ....म फेरी दौडिए उसैमा, त्यस्तै सत्ताइस अठ्ठाइसको उमेर हुदोँ हो ।
‘धाँजा–धाँजा भएर फुटेको पैताला, जिरिङ्ग कैलो कपाल, टाटैटाटा भएको मैलो लुङ्गी,सुकेनास लागेको जस्तो शरीर ।’ कता मैले अस्पष्ट कल्पना गरेकी आइमाई कता यो ? उसलाई राम्रो देखेर खुशीभन्दा बढी आफ्नो कल्पना गलत भएकोमा रिस उठ्थ्यो मलाई । “प्रमेशले खायो त ?” कुरा छल्दै मेरा ओठ उघ्रिए ।
” भान्छा मै हुनुहन्छ, सबैजना सँगै खाने भनेर नी । ” मेरो हात च्याप्प समाउदैं हिडीं ऊ, आज्ञाकारी बालक झैं लुरुलुरु पछि लाग्ने पालो मेरो थियो ।
पिर्का तानेर मलाई दिदैं खाना पस्कन लागी ऊ । प्रमेश चुप्प लागेर कुनामा बसेको थियो । आमा घ्यूको चम्चा घुमाउदै हुनुहन्थ्यो । पालैपालो तीन प्राणीलाई हेर्दै थाल समाएँ मैले ।
“घरमा को–को हुनुहुन्छ नि नानी ?” प्रश्न आमाको थियो ।
“बाबाआमा, भाइ, बैनी र म .......पाँच जना ।”
”भनेपछि बाटो खुलाउने जिम्मा त नानी कै रहेछ नि है?”
”भन्नाले ?” अकमक्क परें म । मुखसम्म पुगेको गाँस थालमै फर्कायो प्रमेशले ।
”बिहे गरेर भाइबहिनीलाई पालो दिने बेला भएछ भन्नु भएको के आमाले । ” उसैले प्रष्ट पारिदिई ।
” भोलि कुरा गरौला नि हैं ?” केही बेरको मौनतापछि अतासिदैं बार्दलीमा पुगे म ।
जसरी प्रश्न असाधारण थिएन त्यसैगरी मसँग भन्नेकुरा पनि थिएन । साहारा खोजे झैं सिरकभित्र गुट्मुटिएँ म । अझ भन्दा आफूलाई त्यसभित्र अटाउन खोजें, बाँध्न खोजेँ तर जति बाधिदै जान्थेँ, थिचिदैं जान्थेँ मनको बाँध उत्ति फुक्दै जान्थ्यो । मथिंगलभरी कहिले आफ्ना भनिनेहरु, कहिले पराइ मानिएकाहरु त कहिले को–को सल्बलाउथें । न गाउँ कि, न त शहर की केटी ‘म’ । गाउँलेको आँखामा शहरीया र शहरीयाको आँखामा गाउँले भएरै मेरा किशोरवय र यौवनका प्रारम्भ आए, फक्रिए । मैले जानेको यति नै थियो कि, मेरा बाबुआमा संसार कै सबैभन्दा राम्रा बाबुआमा हुन् । म जान्दिनथे, कुन पीडाले वा कुन प्राप्तिले उहाँहरुलाई गाउँबाट शहरसम्म डोर्यायो ? हु्नपनि उहाँहरुले हामीलाई कहिल्यै आफ्ना पीडाका कहानी सुनाएर अत्याउनु भएन । अभाव भोगेरै पनि अभागीपनको आभास हुन दिनु भएन । मात्र असीम स्नेह र उत्प्रेरणा बर्साइ रहनुभयो । लाग्थ्यो , जीवन सुन्दर फूल रहेछ ।
कलेजका दिनहरु सकिएपछि रोजगारीको खोजी यात्रा शुरु गरे मैले । अखबारका पानादेखी गल्लिका भर्याङ्गहरुसम्मको त्यो पट्यारलाग्दो यात्रापछि मलाई लाग्यो, कामको हैन नैतिकता र गुणस्तरको अभावले खिस्रिक्क परेको ठाउँ रहेछ शहर अनि अचेतन समाज, राजनैतिक ऐजेरुले ग्रस्त बस्तिको नाम ‘गाउँ’ । प्रगतिपथमा हिडिरहेका साथीभाइ,बूढा हुदैं गएका बाबुआमा, हलक्क बढेर आफूभन्दा ठूला देखिएका भाइबहिनी अनि बेकामी आफू । खै के गर्ने र कसो गर्नेको दोधार,तीनधार, चौधार मै जीवनका उर्वर दिन,हप्ता,महिना र बर्षहरु चिप्लदै थिए । आफू र आफ्नालाई पालैपालो हेदै गर्दा जीवनको पच्चिस बर्ष उड्न लागेको यथार्थले उठाउदै लण्डन पुर्याएथ्यो मलाई ।
सभ्रान्त शहरमा पुग्दैमा समस्याहरुको छु–मन्तर किन हुन्थे र ? त्यो बिरानो मुलुकमा कतिदिन,के खाएर, के गरेर अडिने ? अडिए नै पनि आफू उड्दा–नउड्दै बैंकको नाममा उडिसकेको त्यो हाम्रो सानो घर कसरी निफन्ने ? त्यहा पुग्दा–नपुग्दै समस्याले रिङ्गयायो । कामको खोजिमा सडकका पेटी र पार्कका कुना–कुना चाहार्न लागे म । समय घर्किसकेको एक उदास साँझ उस्तै उदास पाइलाहरु घिसार्दै हिडिरहेको बेला,हिडाँइको सार मिलाउदै थप दुई पैतलाहरु थपिए । त्यो थियो, तीन बर्षदेखी लण्डन मै बस्दै आएको नेपाली युवक ।
”केही कुराको जरुरत परेमा मलाई भन्नुस है ?” घरधन्दाका सारा काम सकेर अतिथि धर्म निभाउन आएकी हुदीं हो ऊ, म विगतबाट घरप्पै वर्तमानमा झरें अनि निदाए झैं गरेर टारिदिएँ । उसका पाइलाहरु बडो उमङ्गका साथ पल्लो कोठातिर लम्के । आफूलाई भने निद्रा लाग्ने छाँटकाँट नै थिएन । त्यसै–त्यसै झर्को लागेजस्तो मात्र लाग्थ्यो । पल्लोकोठाबाट रातभर जसो चुरीका आवाज ,साउतीका स्वरहरु आइरहे । ‘पाँच बर्षपछि भेटिएका लोग्नेस्वास्नी कुराको पोको फुकाउदैं हुदाँ हुन् ।’ मलाई आफ्नै अन्दाज पनि बडो नमीठो लागेर आयो । बेला–बेलामा उछिट्टिएर आइपुग्ने त्यो गुनगुन त्यो जोडी कै हो भन्ने पनि पत्याउनै मन लागेन । थकित भएर कोल्टे फेर्दै गर्दा अस्ति भर्खरैका दिनहरु सिनेमाका पर्दामा झैं फेरी फुत्तफुत्त देखिन लागे ।
त्यो अन्तिम रात लण्डन बसाइको, चीसो–चीसो मौसम, उत्तरी तठबाट लहरिदै आएको हावाको झोक्काले कपाल फिरिरि हुन्थ्यो । टहटह जूनका बीच अर्धगोलाकार चन्द्रमा मुसुक्क मुस्कुराइरहेको थियो । हुन त, बारम्बार देखेको हुँ मैले जूनलाई ,चन्द्रमालाई अनि बढ्दै गएर भेटिएको पूर्णतालाई पनि । फेरी पनि त्यो रात खास थियो ।
”सगुन ! चिया”,म फेरी खग्रङ्ग भए । समय एकै हुदोँ हो ,दुई बिहानका । आफ्नो आशा र विश्वासको अन्त्य भएको कालो प्रभातको यादले झस्किनै लागेथे भित्ते घडिका टिङटिङ आवाजले सचेत गरायो । तृप्तिका पाइला उचाल्दै पधेँरा हिडिसकेकी थिई ऊ । पख्नुस् न..........म पनि दौडिएँ । मिर्मिरे मै आइमाईहरु जम्मा भैसकेका थिए । ‘ओहो !आज पनि पानी लिन आयौं, यत्ति सखारै अंगालो खुकुलो पारिदियो प्रमेशले ?’ दौतरीहरुको छेडछाडमा परी ऊ । ‘उहाँको साथी सगुन‘ मलाई देखाउदै उम्किई ऊ । मलाई भने उसको त्यो रातिएको गाला मनै परेन ।
एकातिर मलाई उसको अगाडी उभिन पनि असहज,असुरक्षित महशुस हुन्थ्यो । अर्कोतिर उसको मसँगको ब्यबहार भने दिनानुदिन आत्मिय हुदैं गइरहेको थियो । घरैमा धुमधुम्ती बसिरहनु अझ सकसपूर्ण हुने हुदाँ धारा–पधेँरा, घाँसदाउरा र गोठालोमा उसको पछि लाग्नु मेरो बाध्यता जस्तै बनेको थियो । ऊ आफ्नो पे्रमको, बिहेको, विहेपछि एकजनाले घर–ब्यबहार चलाउने अर्कोले पढ्ने भनि बनेको सहमतीकोे,पतिपत्नीका बीच चल्ने मिसकलका दोहोरीको अनेकै किस्साहरु सुनाइरहन्थी । गाँउ–ठाउँका जल्दाबल्दा घटना र त्यससबन्धि टिप्पणी आदिको बारेमा पनि साक्षात्कार गर्ने मौका मिल्थ्यो ।
म पुगेको हप्तादिनको दिन हुनुपछर्, भिन्न हावा चलेको थियो गाउँमा । त्यसको प्रभाव घरसम्मै आइपुगेछ, सबैका मुख कुच्चिएका थिएँ । यो हुण्डरी बोकेर आएकी थिई एउटी आइमाई, छोराको उमेरको श्यामेको कान्छी पत्नी बनेर । प्रमेश दिनभर कहाँ थियो मलाई थाहा भएन, बेलुकी लुरुक्क परेर भान्छामा छिर्यो ।खाना पस्कदै गर्दा त्यो प्रसङ्ग फेरी बिउझियो ।
’मान्छेको फेला नपरेका चण्डालहरु’, ऊ कृद्ध थिई ।
”प्रेम गर्छु भनेर कहाँ हुन्छ र ?” सानो स्वरमा आफ्नो कुरा राखे मैले ।
”प्रेमको अर्थ जानेकी छौं सगुन ?...............प्रेमले त मनसँग मन जोड्छ,अर्काको छदाँखादाँको घरसंसार उजाड्ने पनि कही प्रेम हुन्छ ?”उसको आवाजमा आक्रोश थियो ।
”आफ्नै सौता आए झैं पो गर्नु भो तपाईले .........?” भन्न नहुने कुरा अनायसै फुस्कियो ।
”के अनाफसनाफ बोलेकी ?” आमा जाइलाग्नु भयो, ”प्रेम र कर्तव्यको मर्यादा राख्न नसक्ने मान्छे के मान्छे ?”
”अरुको दिल दुखाउनेहरु कहिल्यै खुशी हुन सक्दैनन् सगुन”, आफ्ना आँखाहरु दलिनतिर टाँस्दै कुरामा कुरा थपी उसले ।
”मेरो मतलब त्यो थिएन, मैले त केटीलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ भन्न खोजेको ”, डराउदै–डराउदै त्यो अन्जान आइमाईको पक्ष लिएँ मैले ।
”त्यो त थाहा पाइ–पाइ आएकी हो रे , कुबेतमा सँगै काम गर्थी रे । कमसेकम आफ्नो उमेरको त ख्याल गर्नुपर्ने नि”, आमाको राँकिनु भएथ्यो ।
”कुरा जे नै भएपनि अब एक गल्तीको सजाय जिन्दगीभरी चुकाउनपर्छ त्यसले,महाअभागी त्यो झन् । ” उसको स्वर रिसले काँपेको थियो ।
प्रमेश ढुङ्गा झैं प्रतिक्रियाबिहीन । मलाई भने ऊ देखी पो रिस उठिरहेको थियो । त्यो रिस थियो वा ‘अपराधबोध’ मै जान्दिन ।
तित्ततामै भान्छा उठ्यो । मलाई एकदम नरमाइलो लागिरहेको थियो । ती सबै गाली मै माथी बर्षिएको अनुभूतिले पानी–पानी भएर आफैलाई पढ्दै थिएँ म ।
”रिसायौ कि ?” आवाज उसैको थियो । जवाफ नै नपर्खी ओठहरु पुनः चले । ” मेरी साथीले त्यस्तै एक हर्कत मात्र गरेकी भएपनि ‘जे–जे भयो–भयो, मिलेर बसौ’ भनेर उसलाई माफि दिइन्थ्यो,कदापी दिइन्न थ्यो । यो पुरुषप्रधान समाज हो सगुन, जसले जे भनेपनि बदनाम हुने यातना भोग्ने त केटीले नै हो । ”
भिजेका परेला पुछ्दै गडेर हेरी उसले । ”तिमी नै भन न, जुन घरमा÷जुन मान्छेको नामको सिन्दुर पहिरिएर बषैदेखी उसैको घर÷बाबुआमा÷बाल–बच्चा स्याहारेर–सम्हालेर बसेकी, सबैले रोजेर–खोजेर ल्याइएकी पत्नीको त यो हाल भयो, त्यो नयाँ आइमाईको के होला ? त्यसको त न माइती आफ्ना रहलान्, न घर आफ्नो होला ?भगवान्ले त्यसो नगरुन् ।” एकोहोरो बोलिरहेकी थिई ऊ, अनुहारका नशा फुलेजस्ता देखिन्थे । के भन्नु न के गर्नुको अबस्था मेरो । ”मसँग नरिसाऊ बिन्ती । म मेरी संगिनीको पीडाले फतक्क गलेको छु ।” खुइयय....एक निश्वास फ्याक्दै बिस्तारै उठी ऊ ।
ऊ गएको हेरिरहन मन लाग्यो मलाई । साँच्चै उसका शब्द–शब्द मार्मिक सत्य बोकेर ओर्लिएका थिएँ । बिदेशी भूमीमा एकसाथ रहदाबस्दा एकअर्काप्रति जन्मिएको लगावलाई प्रेम मानेर, कत्रो गल्ती गर्न लागेको रहेछु मैले ? नेपाल फर्कने दिन÷इन्गेजमेन्टको भोलिपल्टको बिहान नेपथ्यको पर्दाबाट छुसुक्क चिहाएको हुनेवाला जीवनसाथीको विवाहित छवी अनि आफूले आवेगमा रोज्न लागेको कालो बाटो रातभरी कोपर्न आइरहे । त्यो भन्दा बेशी मैले कहिल्यै मन पराउन नसकेकी एक गाउँले युवतीमा निहित आत्मसम्मानको चेतले लज्जित भइरहें म ।
अर्को बिहान,ऊ पधेँराबाट फर्कनु अघि नै आफ्नो औंलाको औंठी फुकालेर प्रमेशको हातमा राखिदिदैं आँगनीमा झरिसकेथे म । पर पुगेर हेर्दा ,आमासँगै बिदाइको हात हल्लाइरहेकी थिई ऊ । गलाको तिलहरी र सिउँदोको सिन्दुर कति राम्रो सुहाएको उसलाई, इश्या हैन अगाघ श्रद्धा जागेर आयो । मलाई अनुभव छ,म एकदम हलुङ्गो भएको थिएँ, मानौं उडिरहेको थिएँ । सायद ! त्यो उषाको पहिलो लाली मेरै नामको थियो ।
wow bidhya jee manai chhoyo taa hoo ,very nice story